Fomba 5 ananganana ny fihainoana ara-tsosialy ilay fanentanana marika tena tadiavinao | Martech Zone
Ny orinasa dia tokony ho mailo kokoa noho ny hatramin'izay fa ny fanaraha-maso tsotra fotsiny ny media sosialy rehefa manandrana manatsara ny faneken'ny marika dia tsy ampy intsony.
Ianao koa dia mila mihaino tsara ny tany momba izay tena tadiavin'ny mpanjifanao (ary tsy mila), ary manaraha hatrany ny fironana sy ny fifaninanana indostrialy farany.
Midira fihainoana ara-tsosialy. Tsy toy ny fanaraha-maso fotsiny, izay mijery ny voalaza sy ny tahan'ny fifamofoana, ny fihainoana ara-tsosialy dia tsy misy dikany ao ambadik'ity data ity. Andao hiroboka amin'ity fironana ity ary jereo ny antony maha-zava-dehibe azy.
Inona no atao hoe Fampahafantarana momba ny marika?
Ny fanentanana amin'ny marika dia ny isan'ny olona mahalala momba ny orinasanao sy manaiky fa misy izany. Tsy maninona na naheno momba anao izy ireo, na hahafantatra hoe iza ianao, na raha azony ny zavatra ataonao.
Raha ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika, zava-dehibe ny famoronana sarin'ny orinasanao hahafahanao mifandray amin'ireo mpanjifa amin'ny sehatra ara-pientanam-po.
Ny fananganana marika dia lafiny iray lehibe amin'ny marketing amin'ny Internet. Ilaina ny maka antoka fa fantatry ny olona hoe iza ianao ary inona no dikan'ny marikao. Hanampy azy ireo hatoky anao izy ireo ary hino ny vaovao omenao.
Io koa dia fomba tsara iray hampitomboana ny mpihaino anao ary hametrahana fitokisana amin'ireo olona efa mahalala anao.
tsy misy fanentanana marika, rehefa hitan'ny mpanjifa ianao dia mety tsy hahafantatra na hatoky ny vokatrao na serivisinao izy ireo.
Ahoana ny fandrefesana ny fanentanana amin'ny marika?
Andao atomboka amin'ny metrika fanentanana amin'ny marika azo isaina, izay tokony hanome anao fahatakarana ankapobeny ny fahatsapanao marika amin'ny Internet.
Jereo ny fahita matetika lazain'ny marika anao sy ny toerana niavian'ny mpitsidika anao. Ny fomba tsotra indrindra hanaovana izany dia ny fanarahana ny fivezivezena mivantana (izay fifamoivoizana rehetra izay mankany amin'ny tranokalanao tsy misy fanondroana avy amin'ny motera fikarohana na haino aman-jery sosialy) miaraka amin'ny fitaovana toa ny Google Analytics sy Google Search Console.
Amin'ireto fitaovana ireto dia azonao atao ny mijery ny laharan'ny motera ao amin'ny orinasanao, ao anatin'izany ny isan'ireo olona nanoratra ny tranokalanao mivantana tao anaty bara fikarohana.
Ny refin'ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana Qualitative kosa dia sarotra refesina.
Raha te hanana sary tena marina momba ny sarin'ny besinimaro ataon'ny marikao, araho ny marikao an-tserasera ary diniho ny hevitry ny mpanjifanao, na tsara izany, na ratsy, na tsy miandany.
Mampiasà sehatra media sosialy toy ny Facebook sy Twitter hanarahana ny faritry ny marika nataonao. Amin'ny alàlan'ny fanarahana ny habetsaky ny voalaza ary koa ny fahatsapan'ny mpampiasa anao dia azonao atao ny mampifandray ireo teboka eo anelanelan'ny andrasan'ny mpanjifanao sy ny fahafaham-pony.
Saingy ampy ve ny fanaraha-maso amin'ny haino aman-jery sosialy tena hahafantarana ny fahatsiarovan'ny marika anao?
Eto fihainoana ara-tsosialy tonga mora raisina.
Ny fihainoana ara-tsosialy dia rehefa mihaino ny marika asehonao ianao mba hahafantaranao tsara ny hevitry ny olona momba ny vokatrao sy ny serivisy omenao.
Ahoana no fiasan'ny fihainoana ara-tsosialy? Matetika ianao dia mihaino ny marika, mpifaninana ary teny lakile mifandraika amin'ny orinasanao. Saingy tsy amin'ny media sosialy ihany no hanaovanao izany. Azonao atao koa ny mihaino ara-tsosialy amin'ny tranokala roa samihafa, ao anatin'izany ny bilaogy, tranokala forum, ary na aiza na aiza amin'ny Internet.
Hampiasa ny angona nangoninao ianao avy eo hanohizana ny hetsika manaraka toy ny fandrafetana ny varotra atiny mba hanompoanao tsara kokoa ny mpihaino anao na hanatsara ny vokatrao na ny serivisinao amin'ny voalohany.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fihainoana ara-tsosialy no fomba haingana indrindra hahitanao izay lazain'ny mpanjifanao momba ny marikao sy hahafantarana ny fomba fijery farany momba ny indostriao ary koa ireo mpifaninana aminao.
Ny fihainoana ara-tsosialy dia tena mitovy amin'ny fanaraha-maso ny media sosialy amin'ny tadiavinao marika marika; tsy mitovy ihany koa, satria mifantoka amin'ny toe-tsain'ireto voalaza ireto ny fitsimpon-kevitra mitsikera ny fandraharahana.
Ka izao no ampiasan'ny orinasa ny fihainoana ara-tsosialy hanatsarana ny fahatsiarovan'izy ireo marika.
Fa maninona no mihinana ny fihainoana ara-tsosialy ny marika?
Famantarana ny teboka fanaintainana - Amin'ny alàlan'ny fihainoana ara-tsosialy dia azonao atao ny mamakafaka raha misy singa tsy hita tadiavin'ny mpanjifa ary tsy resahan'ny vokatrao na ny mpifaninana aminao izany. Avy eo, azonao atao ny manararaotra an'io data io mba hivezivezena sy hanatsarana ny paikadim-barotrao mba hampifanaraka tsara ny zavatra tadiavin'ireo mpanjifanao mety. Tsy ampy ny mampiasa Google Alerts irery hanaraha-maso ny indostria misy anao sy ny marika ankehitriny, satria ny tsy fahita matetika sy ny maha-zava-dehibe an'i Google Alerts dia mety tsy mandeha amin'ny toerana indraindray. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana sarotra kokoa toa Awario, azonao atao ny manara-maso ireo fivoarana farany eo amin'ny sehatry ny indostriao ary koa mamakafaka tsara kokoa ireo mpifaninana aminao.
Manaraka ny fironana farany - Tsy ampy ny fahafantarana fotsiny ny alahelon'ny mpanjifanao. Tokony ho fantatrao ihany koa ny zavatra mipoitra eo amin'ny sehatry ny indostriao mba hahafahanao mitaingina sy misambotra ny mpihaino amin'izany fomba izany. Ireo teny lakile sy lohahevitra arahi-maso dia mazàna mivoatra rehefa mandeha ny fotoana. Mba ahazoana hevi-baovao bebe kokoa avy amin'ny loharano marobe indray mandeha, ny fitaovana toy ny Awario dia manampy anao hamaky ny teny lakile sy ny lohahevitra ampiasain'ny olona matetika manerana ny sehatra an-tserasera maro.
Hatsarao ny serivisy ho an'ny mpanjifa - Tsy takona afenina ny fitodihan'ny mpanjifa amin'ny media sosialy hitaraina momba ny marika. Fanadihadiana nataon'i JD Naoty Ratsy nahita fa 67% ny olona mampiasa media sosialy ho fanohanana ny mpanjifa; Sprout Social nahita fa ny 36% amin'ireo olona nanana traikefa ratsy tamin'ny orinasa iray dia handefa izany ao amin'ny media sosialy. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fihainoana ara-tsosialy dia hahafahanao mahazo fomba fijery tsara kokoa momba izay lazain'ny mpihaino anao momba ny vokatrao na ny orinasa amin'ny ankapobeny. Izany dia manome fotoana tsy manam-paharoa ho an'ny marikao hanatsara tsy ny fanoloranao ihany fa koa ny fomba hitondranao ny hevitry ny mpanjifa sy ny tarainananao.
Miteraka fitarihana vaovao - Aorian'ny fidiranao amin'ny fihainoana ara-tsosialy dia ho gaga ianao mahita fa misy mpanjifa vaovao afaka tonga rehefa mitady tolo-kevitra momba ny vokatra izy ireo.
Fivarotana sosialy miaraka amin'ny teny lakile - Amin'ny alàlan'ny fihainoana ara-tsosialy dia azonao atao ny manara-maso teny lakile sasany izay ampiasain'ny mpanjifa hikarohana ny olan'izy ireo ary avy eo hametraka resaka lalindalina kokoa miaraka amin'izy ireo fivarotana ara-tsosialy. Aza mivarotra am-boalohany amin'ny voalohany, fa kosa mizara fampahalalana mahasoa izay mahaliana azy ireo. Ity dia hanampy anao hanolotra ny marikao ho loharanom-pahalalana tsara indrindra rehefa tonga ny fotoana handraisana fanapahan-kevitra momba ny fividianana.
Mba hampitomboana ny fahalalanao marika dia mila mihaino ara-tsosialy ianao. Raha tsy misy fihainoana ara-tsosialy dia tsy ho azonao atao ny mamantatra izay mijanona ao ambadiky ny voalaza ao amin'ny marikao, ary inona no mety ary izay tsy momba ny fanoloran'ny marika anao.
Ny fihainoana ara-tsosialy dia hanampy koa ny marikao hiavaka amin'ny fifaninanana amin'ny alàlan'ny famelana anao hanaraka ny fironana farany sy ny teboka fanaintainan'ny mpanjifa ao amin'ny indostriao, ary hampiasanao izany ho tombontsoanao. Andao hodinihintsika ny fandinihana tranga iray momba ny fomba nanatanterahana ny tombony azo avy amin'ny fihainoana ara-tsosialy ho an'ny marika.
Fianarana tranga fihainoana ara-tsosialy: Tylenol dia mamaritra ny teboka fanaintainana (ara-bakiteny)
Marika ara-pitsaboana iray, Tylenol, te-hamantatra ny fanaintainana sy ny fahasosoran'ny olona voan'ny aretin'andoha. Avy ao aminy fikarohana ara-tsosialy mihaino, Tylenol dia nahita fa ny olon-dehibe 9 amin'ny 10 dia hahatsapa aretin'andoha amin'ny fotoana iray ary ankizy 2 amin'ny 3 no marary an-doha amin'ny faha-15 taonany.
Nampiasa an'io fampahalalana io i Tylenol mba hividianana azy barotra tetika amin'ny famoronana afa-po manodidina io teboka fanaintainana io.
Fianarana tranga fihainoana ara-tsosialy: Netflix dia mamantatra ny fironana arivo taona
Netflix dia mampiasa fihainoana ara-tsosialy hanara-maso ny fironana farany misy eo amin'ny mpihaino kendrena - an'arivony taona - ary avy eo mamporisika azy ireo hisoratra anarana amin'ny sehatra misy azy ireo. Nahavita nisambotra ny Fomba Gerard fironana ao amin'ny Twitter amin'ny alàlan'ny fanovana ny bio-ny Twitter mba hifandraisan'ny mpanatrika ny marika Netflix.
Vakio ny fanadihadiana manontolo momba ny tranga Netflix
Fianarana tranga fihainoana ara-tsosialy: mamaha ny olan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa i Southwest
Southwest Airlines mihaino mavitrika amin'ny fitarainan'ny mpanjifany ao amin'ny media sosialy.
Ohatra, mpanjifa iray antsoina hoe William nandefa bitsika iray momba ny sidina niainany avy tany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Boston Logan mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Baltimore Washington, satria hitany fa mbola nandeha fiarakaretsaka tany Chicago ny fiaramanidina.
Anna, solontenan'ny ekipa mpiahy ara-tsosialy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, dia nanamarika ary namaly ny bitsika 11 minitra taty aoriana.
Nanazava izy fa ny fiaramanidiny dia tsy maintsy niverina tany Chicago noho ny fikolokoloana, saingy niezaka ihany koa izy nanao izay azon'ny mpanjifa tamin'ny sidina hafa azo atao haingana araka izay tratra.
Taorian'ny bitsika iray hafa avy tamin'i William nanontany raha azo atao ny miova amin'ny sidina iray amin'ny 8:15 maraina ho any amin'ny tany nitodiana ihany, dia nanamarina i Anna mba hahitana izay azon'ny ekipany atao.
Nisaotra an'i William koa izy noho ny famelany ny orinasany hahafantatra momba ilay olana, ary nankasitraka ny valiny avy hatrany izy.
@SouthwestAir inona no mitranga amin'ny Flight SWA 4919 BOS mankany BWI? Toa mbola fiarakaretsaka ao Chicago ny fiaramanidina miditra ...
- William Batista (@the_free_willy) Septambra 8, 2019
Amin'ny ankapobeny, ny fizotry ny famahana ny fitarainan'ny mpanjifa dia naharitra 16 minitra.
Fianarana tranga fihainoana ara-tsosialy: Mitarika ny zoho any an-tsambo
Zoho Backstage, rindrambaiko fitantanana hetsika an-tserasera, nahatratra ny bitsika iray avy amin'ny mpampiasa iray antsoina hoe Vilva mba hanoro hevitra ny hanandrana ny vokatr'izy ireo. Fantatr'i Vilva fa afaka mampiasa Eventbrite izy hitantanana ny fisoratana anarana amin'ny atrikasa azy, saingy mitady fomba hafa tsara kokoa izy.
Nanampy i Zoho Backstage fa ny vokatra dia ao anatin'ny rindrambaiko misy azy ireo (Zoho Suite) ary afaka manampy azy amin'ny fampandehanana atrikasa, fihaonambe, famoahana vokatra, na fivoriana kely / lehibe hafa.
Hi @vilvaathibanpb, nijery ve ianao @ZohoBackstage mbola? Ampahany amin'ny @Zoho suite ary manampy anao hanao atrikasa, fihaonambe, fanombohana vokatra, na fivoriambe kely / lehibe hafa.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny zavatra takinao! DM na mandefasa mailaka aminay amin'ny support@zohobackstage.com.
- Zoho Backstage (@ZohoBackstage) Desambra 7, 2020
Nofaranana tamin'ny antso ho amin'ny hetsika ry zareo, nangataka tamin'i Vilva hampahafantatra azy ireo ny zavatra takiny amin'ny fandefasana azy ireo Twitter DM na mailaka.
Awario Social Media Intelligence sy Analytics
Awario dia fitaovana fihainoana ara-tsosialy izay manome ny fidiran'ny marika amin'ny angon-drakitra izay manandanja amin'ny orinasany: fahitana amin'ny mpanjifany, tsena ary mpifaninana aminy.
Fantaro bebe kokoa momba ny sehatra fitsikilovana ara-tsosialy an'i Awario
Disclosure: Martech Zone dia mpiara-miasa amin'i Awario ary mampiasa ny rohy mifandraika amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: awariomarikafanentanana marikaaraho ny fironana twitterhiteraka fitarihana vaovaofantaro ny teboka fanaintainanamanatsara ny serivisy ho an'ny mpanjifamampihiditra barotraNetflixfihainoana ara-tsosialyfandalinana tranga fihainoana ara-tsosialyteny fanalahidy fihainoana ara-tsosialyfikarohana ara-tsosialy mihainohaino aman-jery sosialyfanadihadiana amin'ny media sosialyhaino aman-jery sosialyTwitterserivisy ho an'ny mpanjifa twittertaranaka mitarika twitterfironana twittertylenolinona ny fanentanana amin'ny marikainona ny fihainoana ara-tsosialyZoho any ambadiky ny sehatra